ကမ္ဘာတစ်ဝန်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ သန်း ၃၀၀ ကျော် အထိ ရှိလာ - Xinhua News Agency
ဂါနာနိုင်ငံ၊ Accra မြို့ ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနေရာတစ်ခု၌ သူနာပြုတစ်ဦးက အမျိုးသားတစ်ဦးအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေမှုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက်၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ သန်း ၃၀၀ ကျော်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (CSSE) မှ သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၅၈,၄၄၉,၈၉၈ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၈၃၃,၉၅၇ ဦးရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှု နှစ်ခုလုံး၌ အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်သလို ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်၍ ကမ္ဘာ့လူသေဆုံးမှု၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးစက်ခံရသော အတည်ပြုလူနာအရေအတွက် သန်း ၁၀၀ ဖြင့် စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ မှတ်တိုင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် သြဂုတ် ၄ ရက်တွင်မူ သန်း ၂၀၀ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ပျံ့နှံ့နေသော မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်များအားလုံးကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရောဂါပြင်းထန်မှုများနှင့် သေဆုံးမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အစီအစဉ်၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင် Maria van Kerkhove က ဇန်ဝါရီ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ပြည်သူတွေသိဖို့ တကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆေးထိုးဖို့အလှည့်ရောက်ရင် ကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက တကယ့်သေရေးရှင်ရေးကိစ္စဖြစ်လို့ပါ’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ (Xinhua)
1st LD Writethru: Global COVID-19 cases surpass 300 mln: Johns Hopkins University
NEW YORK, Jan.6(Xinhua) — Global COVID-19 cases topped 300 million on Thursday, according to the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University.
The global caseload reached the grim milestone of 100 million on Jan. 26, 2021 and rose to 200 million on Aug. 4.
Maria van Kerkhove, technical lead for the World Health Organization’s Health Emergencies Program, said Thursday that current COVID-19 vaccines do work against all variants that are circulating and are highly effective against preventing severe diseases and death.
“I think that’s really important for the public to know … when it is your turn, get vaccinated because it’s really critical,” she said. Enditem